Iindaba- [I-Asia yaBantu abaDala i-AAE 2020] nge-25 ka-Agasti ka-25, ngo-2020, kwiNgqungquthela yaseHong Kong nakwiziko leMiboniso
I-Asia Adult Expo (AAE) iphele ngempumelelo kwiNgqungquthela yaseHong Kong nakwiziko leMiboniso. Idibanisa malunga nama-200 ababonisi kunye neempawu ezivela e-China, e-Indiya, eTaiwan, eNetherlands, eNew Zealand, eRashiya nase-United States. Ukudibanisa iithoyi zabantu abadala, iilingerie ezingamanyala, iimveliso zempilo, iDBSM kunye nabanye abavelisi kunye neebranti ezinxulumene noko, iAAE ibonelela abaphulaphuli abaqeqeshiweyo ngeendlela ezahlukeneyo zodidi oluhle kunye nefashoni.
Kulo nyaka, malunga ne-3,800 yeengcali zeshishini ezivela kumazwe angama-52 nakwimimandla, malunga ne-4,800 yeendwendwe zeshishini ezixhaswe ngabatyeleli abaziingcali abavela kumazwe ahlukeneyo angama-52 kunye nemimandla, kubandakanya i-Australia, iBrazil, i-United Kingdom, iCanada, iSwitzerland, iChile, iChina, iColombia, iDenmark, I-Egypt, iFrance, iJamani, i-Hong Kong, i-Indonesia, i-India, i-Itali, i-Japan, i-Kenya, i-South Korea, i-Macau, i-Mexico, i-Malaysia, i-Netherlands, i-New Zealand, i-Panama, i-Philippines, i-Poland, i-Russia, i-Singapore, i-Sweden, i-Thailand, i-Turkey, i-Ukraine. , EUnited States, eVietnam, eSpain nase Mzantsi Afrika. Abaphulaphuli bevela kude bezokuthenga, ukwakha uthungelwano, ukuphonononga amandla ophuhliso lweentengiso ezintsha kunye nokufumana amaqabane. Ingxelo entle evela kubabonisi nakwindwendwe zeshishini zibonisa ukuba uthungelwano lwamashishini lwamazwe aphesheya lweAAE lubonelela ngeqonga lezeshishini elinobuchule kunye nelizinzileyo kushishino lwabantu abadala.
Ababonisi ukongeza ekubonakaliseni iithoyi zabantu abadala, oonodoli abadala, ifenitshala yesondo, iimveliso zempilo yovakalelo kunye nezinye iimveliso, iimveliso zangaphantsi kunye nabavelisi kwimimandla eyahlukeneyo batsale umdla wabathengi abaninzi. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, ibango lempahla yangaphantsi belinyuka, liphucula ukuzazi kwabasetyhini ngemizimba yabo, kunye nokufunda ngakumbi malunga nendlela ezahlukeneyo zeempahla zangaphantsi ezenza ukuba bazithembe kunye nobomi bezesondo. Zisixhenxe 'ezinzulwini zobusuku, SUNSPICE, EDENKISS ... Izimvo zabaphulaphuli bezentengiso kwiimveliso zohlobo oluthile ezibonisa, ezinokubonisa amandla eemveliso zangaphantsi zangaphantsi. Uninzi lwabavelisi abakumgangatho ophezulu bakwabonisa iimveliso ezinje ngee-corsets, iimpahla ezi-sexy, amalaphu e-sock, iimpahla zangaphantsi zamadoda kunye ne-SM bondage.
Iqonga labadala lonyaka le-AAE kwiinkcubeko ezininzi nakumashishini ahambelana noko
Ukusukela ngo-2017, "iQonga leeNgxoxo laBantu abaDala leKamva" imeme izithethi eziqeqeshiweyo zehlabathi ukuba zabelane ngolwazi lwamva nje kubuchwephesha babantu abadala kunye neemveliso, impilo yezesondo, imikhwa yabantu abadala kwishishini, imithombo yeendaba kunye neminye imikhombandlela. Kulo nyaka, iingcali zeshishini ezichaphazelekayo zamenywa, ezinje ngoosaziwayo baseFrance bezentlalo, unyango ngesondo kunye neengcali zamaqela ezempilo, kunye neenkampani zovavanyo zamanye amazwe. Ukusuka "Ukuxoxa ngokhuseleko kunye nokuthotyelwa kwezinto zokudlala zabantu abadala", "Inguquko yeeDivayisi eziDibeneyo", "Indlela yokuThengisa ngeMithombo yeendaba yezeNtlalontle: Abaphulaphuli beLGBT kunye noLuntu" ukuya "kwiMpilo yezeSondo, ukungcamla kunye noKhuseleko", iAAE ithathe inxaxheba kuyo yonke imiba yeShishini kunye neshishini Iindwendwe ziyaluqonda ulwazi lwangaphambili kushishino lwabantu abadala.
I-AAE iyaqhubeka nokukhula kunye nomzi mveliso, iya kutsala ababonisi abaninzi, imeme abathengi abangakumbi bamashishini aphesheya, kwaye ifake izinto ezintsha, ngomboniso wobungcali we-B2B ukudala imeko yothethathethwano kwezorhwebo kubathengi nakubathengisi. Ithuba lemiboniso elilandelayo ngu-Agasti 25-27, 2020. Sanibona nonke kwiNgqungquthela yaseHong Kong nakwiziko leMiboniso!
IiVibrators zeSilicone, Amathoyizi eSondo aBasetyhini, Clitoral Vibrator, I-G-Spot Vibrator, Imivundla yemivundla, Iithoyi zesini zabantu abadala,